JIMCAALE Dilkiisu Waa Cadaaladii, Xeerkii Iyo Xaqii Oo Lagu Dhagaroobay. | Cadceed newssite
JIMCAALE Dilkiisu Waa Cadaaladii, Xeerkii Iyo Xaqii Oo Lagu Dhagaroobay.
Waxaa curtay sanad cusub oo rajo xambaarsan. Waa 2013 oo maanta kow ah oo xalay saqdii dhexe bilaabmay aduunweynahana waa laga xusay. Dadbaa jira aanay u suuto galin inay xusaan sanadka cusub. Dadkaas waxaa ka mid wiil dhaliyaro ah oo uu sanadka cusub ugu curtay qabriga lama huraanka ah ee aadamuhu wada geli doono. Allah ha u naxariistee, waa wiil caafimaad qabay, rajo iyo hammi balaadhan hortiisa yaaleen oo mustaqabalkiisu u iftiimaayay. Wuxuu ahaa wiil dhalin yar oo firfircoon oon aaminsanahay in maankiisa iyo qalbigiisa ay ku jireen qorshe nololeedkiisa iyo hamigiisa sanadkan 2013 ee isaga qabriga ugu curtay. Waa JIMCAALE CABDI MAXAMUUD.
Maalin iyo saacado markay ka hadheen sanadkan cusub, cabaaro shantii iyo badhkii galabnimo (30/12/2012) waxaa JIMCAALE CABDI MAXAMUUD haleelay rasaas meegaar weyn oo jidhkiisa lagu rusheeyay. Dhulka markuu ku dhacay wuxuu u ruqaansaday geed hoostii. Ma kici karo, gurmad ula carara xagga dhakhtarka dhaqso uma helin, wuu dhiig-baxay, degdegna Koomuu u galay. Rasaas AK47 ka dhacday ma ahayn waxa haleelay JIMCAALE. Qori ka afweyn AK47 ayaa lagu weeraray wiilka. Dhakhtarka dhexdiisa ayay naftu kaga baxda. Ubaxii baxaayay halkaas ayuu ku dhintay. Shalay oo sanadkii hore ugu dambaysay (31/12/2012) ayaa la aasay Jimcaale. Inaalilaahi Wa Inaa Ilaahi Raajicuun.
Intiina Nool, Sanad Wanaagsan
By Jamac O Geele